"Lyudnikov Isiqhingi" (Volgograd), indaba Battle of kwaseStalingrad
Namuhla "Lyudnikov Isiqhingi" - a eziyinkimbinkimbi yesikhumbuzo anikezelwe omunye lokulwa okukhulu kakhulu kwaseStalingrad phakathi neMpi Yezwe II. Nazi kwezinyanga ezimbalwa abandayo ukugcina ukuzivikela 138th Infantry Division.
Adume "Isiqhingi Lyudnikov" lethiwa behlonipha uColonel Ivan Lyudnikov, owayala 138th Infantry Division ngesikhathi Battle of kwaseStalingrad. Lokhu Abezempi wenza enomsebenzi obalulekile zamasu. Amasosha kwadingeka ukuvikela edolobhaneni Lower ngothango kanye isitshalo esitholakala kulo.
izimo elingalodwa eyaqala ukuvikela emzaneni, kuzovumela abacwaningi esizayo ukubiza leli zwe penny "isiqhingi." Amazwi ushiye abantu, kodwa kamuva kwathiwa semthethweni ngokusebenzisa yisikhumbuzo yomphakathi. Inhloso esemqoka amaJalimane kulo mkhakha kwaba wezikhali ifektri "ngothango". Lapho ehlaselwa Wehrmacht kwaseStalingrad, ke methyl ezintathu zinhloso. Ngaphezu "isivimbezelo" kulolu hlu amasu kwaba ifektri "Red Okthoba" nokukhiqizwa kwezincwadi ugandaganda endaweni yokukhanda.
Yini wawubaluleke kakhulu inkampani, esivikela Ivan Lyudnikov futhi udondolo lwakhe? "Ngothango" Imboni yasungulwa by British inkampani "Vickers" ngo-1913 Tsarist Russia. olwesimanje izindawo zezimboni ngesikhathi kwetimboni lokuqala Soviet oneminyaka emihlanu izinhlelo. Onjiniyela eseqala ukuveza ezinkulu-osezingeni izibhamu lapha iRed Army. Ngaphezu kwalokho, kukhona okuphumayo nezakhamuzi. Kodwa-ke, ukuthi abetshalwe ibhizinisi kwaba isici kokunquma ekukhetheni Wehrmacht njengoba shaqa.
Ngobusuku obandulela nempi "ngothango" waqala ukuveza izibhamu howitzers BR chungechunge. Ngo-1940, bayiswa yibutho, waphumelela ekumelaneni ubudlova German kuzo zonke izimpi. Nqumani futhi abhubhise isitshalo kwakusho ukuphuca eSoviet Union khona wezikhali ezibalulekile, ngaphandle lapho ukuziphatha impi yayiyoba ukuzibulala.
Ngobusuku obandulela ukuvela amaJalimane emadolobheni asemaphethelweni kwaseStalingrad esitshalweni zabantu zathuthelwa kwezinye izindawo cishe bonke abasebenzi (90%). Baya Urals naseSiberia, ukuqinisekisa operation esitebeleni of embonini langemuva. Ezisele "isivimbezelo" abantu abasebenzayo, naphezu nesikhathi sokuqhuma kwamabhomu nokungabi kuhlasela izitha, waqhubeka ukukhiqiza imikhiqizo osendaweni ezibalulekile. Laba bantu 400 ababesebenza izimo okungabekezeleleki. Ngesikhathi imboni phezu nokudla namanzi ahlanzekile. Kwakungekho gesi, futhi emoyeni kwaba udushliv. Ngaphezu kwalokho, lezi zisebenzi zisiza ibutho empini baso engibukhulumile isitha phambili.
Igalelo lokuqala amaJalimane senzeka Agasti 23, 1942. "Ngothango" Isitshalo bekulokhu ngaphansi umlilo kusukela emoyeni. Ngo-October, umyalo Soviet ethunyelwe izindonga zayo le 138 th Infantry Division. Useke sawela ngempumelelo ebhange kwesokudla iVolga, ngalungiselela ukuzivikela eside. Ekwindla ka-i- "isiqhingi" kwaba yesehlakalo abanolaka lokulwa lomgwaqo zonke imitha esingeziwe umhlaba.
AmaJalimane wazama nilidle isitshalo "ngothango", hhayi kuphela ngoba enikeziwe eSoviet ibutho izikhali, kodwa futhi ngoba lo mkhakha phambi ukunika ukufinyelela iVolga. Kulapha ukuthi Wehrmacht ihanjiswe empumalanga ngangokunokwenzeka kulo lonke yiMpi Enkulu Yobuzwe. The Battle of kwaseStalingrad obekumele ukuxazulula konke.
Uma-Third Reich yazuza ukulawula emfuleni, wayengeke usike ezokuthutha Umthambo ezinkulu. On ke cruised umkhumbi ngezibhamu, abantu, nokudla namafutha Caucasian. ESoviet Union washiya ngaphandle imithombo ebalulekile, kulahlekelwa eliphikisayo. It Lyudnikov Isiqhingi isibe omunye juqu impi enkundleni, okuyinto kuhlehlisiwe yonke inkambo yokuhle hhayi nje ngokuthi yiMpi Enkulu Yobuzwe, kodwa seMpi yoMhlaba yesiBili.
Phakathi iVolga kanye Wehrmacht
Novemba 11, 1942 amaJalimane wafohla kuya iVolga. Ngakho 138th Division ukuthi izungezwe izinhlangothi ezintathu. amasosha aseSoviet kule mboni kuvikelwa umbutho sendaweni encane ubude 700 nobubanzi ayi-400. Ngasempumalanga Lyudnikov namadoda ayekanye naye embozwe iqhwa mncane iVolga Novemba. ukulethwa kokudla esitshalweni phezu komfula nzima ngenxa yokuthi amanzi awo zilawulwa amaJalimane. Ukudla weza ngendlela engavamile, futhi amasosha babelamba. Isiphathamandla futhi amadoda wacela wathola isabelo nsuku zonke nanhlanu amagremu zama bhisikidi, okusanhlamvu kanye nedlanzana ushukela. The Battle of kwaseStalingrad engawayekanga ubani.
Kanye ngosuku Lyudnikov wanika cartridges amathathu khona. amasosha aseSoviet ngesinye isikhathi kwadingeka ngisho ukulwa ngezikhali lithunjwa. Kwelinye izimpi 138 Division wabhubhisa lamabutho sapper we Wehrmacht. Ngemva kwalokho, le iRed Army waya German Browning ezakhiwe izingalo yomunye. AmaFascist waqala ukuligalela amachashazi yabo.
Hlukanisa ubuqhawe signalers, usinikeza ukuxhumana Division 138th nendlunkulu. Leli qembu kwenziwe umsebenzi walo, ngesikhathi udonga phakathi isikhundla labadubuli. I iphuzu contact ibizwa ngokuthi "Spot". Kuz'minskii Usayitsheni futhi ezintathu zangasese (Vetoshkin, Harazin futhi Kolosovsky) babenza konke okusemandleni ukuze indlunkulu kungenzeka bezilolonga ukuthi kwenzekani futhi anikeze imiyalo Lyudnikov. Ngisho e sokuthula, lezi signalers wenziwe lesikhumbuzo ehlukile.
Ngo-December, i-iVolga ngokupheleleyo dibikeza ice okuqinile. Kube ingozi imvelo ingqikithi Division 138th. Khona-ke inkinga Lyudnikov nethimba lakhe wafika 400th wezikhali Battalion. Itholakala kwi Hare Island , futhi ngeke uvumele amaJalimane kusukela iVolga esifundeni ukuba ahaqe abavikeli ka "ngothango".
Amaviki amabili okuqala December 1942 babe okubi amasosha aseSoviet kule mboni. Ekugcineni, 14 abavela endlunkulu oda kwafika umbiko wokuthi leyo Division 138th kwaba ukuqala esiphikisayo okuhlaselayo ngenhloso ukuhlanganisa ne izingxenye angomakhelwane iRed Army. Khona-ke abavikeli zalesi sihlahla wakwazi ukuphulukundlela kwamamitha angu-200 futhi ayeke onqenqemeni kule ndawo.
Ngemva kwamasonto ambalwa, ngo-January 10, 1943, kwaqala iMpi okuhlaselayo jikelele Soviet kule ngxenye kwaseStalingrad. 138th Division wathuthela kwenye into amasu ezibalulekile - ifektri "Red Okthoba". Yaphela kanjalo-ke ukuzivikela nobuqhawe "ngothango". Abahlanganyeli empini ndawonye kwethulwa phambi imiklomelo. Lyudnikov ngokwakhe waba uMajor General.
Battle e kwaseStalingrad ikakhulukazi eyaziwa ngokuba eziningana letibonwako amasosha aseSoviet isibindi futhi inflexibility. It sekuwuphawu enjalo Lyudnikov Island. Volgograd namuhla uyakhumbula namaqhawe alo bebahloniphe inkumbulo yabo.
KaDeveli IBhayibheli - wesandla esiyingqayizivele Zesintu?
Hoplites ngesiGreki: zempi, isithombe. Bobani hoplites YesiGreki?
Inhlekelele e Kazan: izimbangela, ukuhlaziya isazi, sokuqonda "ibhokisi elimnyama"
Memorandum Association: inqubo okuphetha nezici
Izikhwama "Grett" - inketho ye-chic kulaba besifazane
Zingaki kilojoule amabhilikosi, kanye nokuqukethwe izakhi uginindela isithelo imbewu